အပနျးဖွစေကျမှုလကျမှုလုပျငနျးရှငျမြား | JAPAN DISCOVERY
မူလနရော » အပနျးဖွစေကျမှုလကျမှုလုပျငနျးရှငျမြား
Updated: 2016-10-20 10:30
Updated: 2016-07-11 14:35
Akiyoshidai safari land တိရိစ္ဆာန်ဥယဉ် ကစားကွင်း
တောတွင်း အရိုင်း အတိုင်း ရှိနေတဲ့သားကောင်ကြီးတွေ နဲ့ သားကောင်လေးတွေ ကို တကယ့် နီး နီးကပ်ကပ် မြင်တွေ့ နိုင်တဲ့ တိရိစ္ဆာန်ဥယဉ် ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်စရာကောင်း တဲ့ တိရိစ္ဆာန်လေးတွေ နဲ့ လဲပျော်ပျော် ပါး ပါး တေ...
Updated: 2016-07-11 13:19
ဟက်ခဲဂျီးမား ကျွန်း ပင်လယ် နိဗ္ဗာန်ဘုံ (Hakkeijima Sea Paradise)
ယိုကိုဟာမ ၊ဟက်ခဲဂျီးမား ကျွန်း ပင်လယ် နိဗ္ဗာန်ဘုံ ဟာ ဆို ရင် ဂျပန် နိုင်ငံ မှာရှိ တဲ့ ကြီးမားလှသော အဏ္ဍ၀ါ ပြတိုက် ကြီး နှင့် ရေ နဲ့ပက် သက် တဲ့အပမ်းဖြေ ကစားစရာများ ရှိသော နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေအပြင်...
Updated: 2016-07-07 13:21
Fujiko · F · Fujio Museum ဖူဂျီကို ၊ ဖူဂျီအို ပြတိုက် ( ခါနဂ၀ ) ဂျပန်
Fujiko · F · Fujio Museum ဖူဂျီကို ၊ ဖူဂျီအို ပြတိုက် ဟာ ခါနဂ၀ ခရိုင် ခါဝစခိ မြို့ တာမ ရပ်ကွက် မှာ ရှိ တဲ့ ကားတွန်းစရာ ဖူဂျီကို နဲ့ ဖူဂျီအို ရဲ့ လက်ရာတွေ နဲ့ သူ့ဇာတ် လမ်း ထဲ က ဇာတ်ကောင်တွေ ၊ ဇာတ်ကေ...